I-Topaz iyitshe elijwayelekile kakhulu kodwa i-top's eye topazi ayijwayelekile - ividiyo
Ikati lika iso lekati
Thenga iso lekati yemvelo esitolo sethu
ITopazi liyitshe elivamile kakhulu kodwa i-top eye iso lekati alivamile. Imithombo emibili eyinhloko iBurma (iMyanmar) neMadagascar
I-topazi ehlanzekile ayibalabala futhi ayibala kodwa ngokuvamile igcwele ukungcola, okufana ne-topazi i-red, i-yellow, i-gray gray, ebomvu-i-orange noma i-brown brown. Kungabuye kube mhlophe, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, kwegolide, okubomvu (okungajwayelekile), ophuzi obomvu noma opaque obala / othungayo.
I-Orange topaz, ilitshe lokuzalwa likaNovemba lendabuko, uphawu lobungane, kanye namatshe ayigugu wombuso wase-US Utah.
I-topazi yase-Imperial iphuzi, i-pink (engajwayelekile, uma imvelo) noma i-pink-orange. I-Brazilian Imperial Topaz ingase ibe nephuzi elikhanyayo ekujuleni kwe-golden hue ejulile, ngezinye izikhathi ngisho ne-violet. Ama-topazes amaningi ashisayo noma aphuzi aphathwa ukuze awenze aphuzi eliphuzi, igolide, i-pink noma i-violet enemibala. Amanye amatshe angaphansi kwe-topaz angaphelelwa ukukhanya kwelanga isikhathi eside.
I-topazi eluhlaza okwesibhakabhaka iyitshe lesikhumbuzo selizwe lase-US laseTexas. Ngokwemvelo okwenzeka okwesibhakabhaka akuvamile. Imvamisa, umbala ophuzi noma onsomi ophuzi nohlaza okwesibhakabhaka uphathwa ngokushisa futhi uhanjiswe ukuze kukhiqizwe okwesibhakabhaka okufisayo okuthe xaxa.
I-topaz ivame ukuhlotshaniswa namadwala angamacilisi angamacilisi we-granite nohlobo lwe-rhyolite. Ngokuvamile i-crystallizes nge-granitic pegmatites noma emiphakathini yomswakama we-rhyolite lava flows kuhlanganise nalabo aseTopaz Mountain entshonalanga ye-Utah ne-Chivinar eNingizimu Melika. Ingatholakala nge-fluorite ne-cassiterite ezindaweni ezihlukahlukene kuhlanganise ne-Ural ne-Ilmen izintaba zaseRussia, e-Afghanistan, eSri Lanka, eCzech Republic, eJalimane, eNorway, ePakistan, e-Italy, eSweden, eJapane, eBrazil, eMexico, e-Flinders Island, e-Australia, ENigeria nase-United States.
Umphumela wamehlo wekati
Ku-gemology, ukuxoxisana, nokuxoxa ngeso lengqondo noma kweso, kuyindlela ebonakalayo yokubukeka ebonakalayo kumatshe amatshe athile. Ihlanganiswe kusukela eFulentshi "oeil de chat", okusho ukuthi "iso lenkathi", ukuxoxisana kuvela noma ngabe isakhiwo sezinto ezibonakalayo, njengokuthi i-cat's eye tourmaline, ikati lamehlo lekati, noma okuvela ezintweni ezifakiwe noma emagcekeni ngaphakathi kwetshe, njengokuthi i-chrysoberyl iso lekati. I-precipitates ebangela ukuxoxisana kukhona izinaliti. Ama-sampuli ahloliwe awanikezi ubufakazi bokuthi amathebhu noma amafayili.Izilinganiso zivimbela konke ukuvumelanisa ngokuphambene ngokuqondene nomthelela weso. Ipharamitha ye-lattice yezinaliti ihambisana nomunye wezintambo ezintathu ze-orthorhombic crystal of the i-chrysoberyl, ngenxa yokulungiswa ngaleyo ndlela.
Lo mkhuba ufana nobuhle be-spool yesilika. I-streak ekhanyayo yokukhanya ebonakalayo ihlale iqondiswa ngokuqondile kumqondisi wezintambo. Ukuze uthole igugu lokubonisa lo mphumela kangcono, ukuma kufanele kube i-cabochon. Ukuzungeza ngesisekelo esicwecwe, kunokuba sibe nezinhlangothi ezihlukahlukene, nezinsimbi noma izakhiwo ezinamafrida ezihambisana nesisekelo segama eliqediwe. Ama-specimens aphelile kakhulu abonisa okukodwa ngokubukhali. Ibhande lokukhanya elihamba phezu kwetshe uma liphenduka. Amatshe axhumene nesimo esingaphansi afaka umphumela obhekene naso njengoba kubonakala ngezinhlobo ze-quartz ze-cat-eye. Amatshe athile angabonisi kahle.
Ikati lamehlo lekati elisuka eBurma
Amathegi I-Bicolor, Topaz